Yega Yega uye Yemwoyo-inonzwa Kutenda Kwauri | Martech Zone
Svondo, Zvita 24, 2006 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ino inguva isingafadzi yebasa rangu online. Nhasi blog yangu yakataurwa pane ese ari maviri John Chow uye Seth Godin's blog. Uye ini ndakanga ndichangobva ari musoro wenyaya unobata kumeso blog kupinda paPat Coyle's blog! Vhiki rapfuura, Mike pa ConverStations yaive nenyasha zvakakwana kuti anditaure se "Z-lister". Kukwidziridzwa kwake kwekuzvipira kwandiri kwakaita kuti bhurogi rangu ritaurwe pamusoro pevamwe vanopfuura makumi manomwe, kusanganisira kutaurwa nhasi pabhurogu raSeth Godin.
Mumwedzi mishoma yapfuura, blog yangu yakakwira mukati motokari uye nesimba.
Kukura uku kwese hakusi kubva kuhunyanzvi hwangu. Zvave zvichibva pakufunga kwangu kwekutora nekuparadzira ruzivo uye dzako kugovana kwe dzako ruzivo uye hunyanzvi. Ndinoda mukana wekutenda mumwe nemumwe wenyu. Muchokwadi, kana ndikafamba chero gore rinotevera nebasa, chimwe chezvinangwa zvangu kuita izvo chete. Ndichakuzivisa kwauri kuenda, uye tichasangana tichinwa kana kofi. Kana iwe uri kuuya kuIndy, ndapota usazeze kundiudza ini.
Dzimwe nguva iyo blog inoshandisa yakawandisa ezuva rangu, asi zvese izvo isu newe zvatiri kuita zvinoita kunge zviri kushanda:
Ini ndinoedza kupa yekutanga chinyorwa pane mazhinji zvandanyora. Nenzira iyoyo blog yangu haisi chikamu chehurukuro kana kungodzokorora nhau, ndizvo zviri kutaurwa nezvazvo. Iri ibasa rakaoma, asi riri kubhadhara.
Nguva dzese dzandinoona chirevo kublog rangu pane imwe saiti kana blog, ndinoedza kupindura nekutenda munhu - kunyangwe kana yavo positi isiri yakanaka (kunyanya kana isiri). Iko kukosha kuri mukukurukurirana. Ini handisi nguva dzose (ok, kashoma) kururamisa, chero nzira.
Ini ndinotora chikamu muchikwata mablogging zviitiko. Kana Problogger haisi chikamu chako chezuva nezuva blogging maitiro, zviite saizvozvo. Darren anowanzo shora blogosphere nemapoka emapurojekiti. Ivo vese vanowana kutarisisa kwakawanda uye kuratidzwa.
Ini ndinogovana zvinhu zvandakadzidza.
Ndinoedza kubatsira chero munhu anobvunza. Zvinondiisa munyatwa nguva zhinji, asi ndizvo zvandinofanira kupa. Ndiyo 'present' yangu, kana uchida.
Ini ndinobatanidza misoro kune mamwe mabloggi. Kana ndikaona musoro wenyaya wekukurukurirana apo mumwe wevablogi wandinoverenga ari nyanzvi, ndinogara ndichiedza kubatanidza izvo zviviri. Ndeipi network kana iwe usiri kuzonyatsobatsira kugadzira kubatana?
Iwe unoramba uchisimudzira blog yangu kwandiri.
Ndakagara paStarbuck izvozvi. Kutaura chokwadi, ndanga ndakaderera pasi nhasi kuti handisi nevana vangu manheru ano kana mangwana. Ivo vari kushandisa Kisimusi yakanaka naAmai vavo & mhuri yekurera. Sezvo ini ndanga ndichinyora, ini ndakawana email email kubva kushamwari yangu, Glenn, uyo ari paMission kuMozambique uye zvakandidzosera mukunzwa zvakanaka nezve zvakawanda zvekuti ndinofanira kutenda.
Zvakandiyeuchidza kuti vamwe vari kuzvipira zvakanyanya munguva ino yezororo. Ini handisi kunyatso kubayira chero chinhu… ndakagara neangu Peppermint Mocha mune inodziya kofi imba. Iyo Berrymans vakatora mhuri yavo yese kuita basa kuMozambique kunobatsira kudzidzisa nekuparadzira izwi rakanaka. Unogona kufungidzira here? Ndine rukudzo runoshamisa kune avo vanopa zvakanyanya.
Uye ndinorangarira mauto edu. Ini ndaive mhiri kwemakungwa kwemwedzi mipfumbamwe panguva yeDesert Shield / Dutu reDutu uye ndakapedza Kisimusi ichiyangarara muPersian Gulf. Zvinorwadza kuva usipo panguva yemwaka inowanzo dhonza mhuri pamwechete. Mwari komborera mauto edu, mhuri dzavo, uye idzo mhuri dzakarasikirwa zvakanyanya.
Ndinokutendai mose! Iwe wakanyatsoita iri risingafadzi zororo kwandiri.
Makorokoto pabasa rese rakaoma kubhadhara. Ndinonakidzwa nekuverenga bhurogu yako, kunyangwe ndikasataura vhiki rega rega. Mahara mazororo uye chengetedza basa rakaoma.